Nhau - Samsung Display Inovhura OLED Global Webhusaiti: Inotsigira Chinese, Korean, uye Chirungu mitauro
TN-TFT LCD MODULES INE TOUCH PANEL
Samsung Display Inovhura OLED Global Webhusaiti: Inotsigira Chinese, Korean, uye Chirungu mitauro
Nhau kubva munaNovember 22: Nhasi @ Samsung Display yakaziviswa zviri pamutemo paWeibo kuti Samsung Display ichangobva kuvhura OLED yepasirese webhusaiti. Vatengi vanogona kunzwisisa zvakajeka matekinoroji ane hukama neOLED, maitiro, multimedia uye ruzivo rwenhau kuburikidza newebhusaiti.
Iyi webhusaiti ichangobva kutangwa ichaburitsa ruzivo rutsva nezve OLED, kuratidza zvakasiyaniswa zvigadzirwa uye tekinoroji zvakanakira Samsung OLED, uye ichave nzvimbo yekukurukurirana yevashandisi pasi rese. Pano, pane misimboti yeOLED, sumo kune yakasarudzika mabhenefiti eOLED yakagadziridzwa kune ega ega maapplication, akasiyana evhidhiyo ruzivo, uye ongororo nehunyanzvi midhiya uye nyanzvi dzemhiri kwemakungwa. Iyo yese dhizaini yeSamsung OLED ichave yakazara ruzivo uye yakajeka kune vatengi. .
Iye anoona nezve Samsung Display akati: “Sezvo musika weOLED uchiwedzera kumisika yakaita semidziyo inopetwa uye makomputa ekunyorera, kufarira kwevatengi kuOLED kuri kuwedzerawo. Naizvozvo, takagadzira webhusaiti yakatsaurirwa kuti ipe ruzivo rwehunyanzvi uye kuongororwa kwemusika. OLED-inoenderana nezvirimo, uye nekushingaira kuita kushambadzira kupedzisa vashandisi.
Nguva yekutumira: Nov-24-2021
Inzwa wakasununguka kutibata. Tinogara takagadzirira kukubatsira.